HOME » सर्वोच्चबाट रिहा भए लगत्तै डा. केसी फेरि अनसनमा
काठमाडौं । अदालत र न्यायायाधीशको अवहेलना अभियोगमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको डा.गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार साधारण तारिखमा रिहा गरेको छ। रिहा भए लगत्तै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै डा. केसीले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अनसन सुरु गरेका छन्।
केसीविरुद्धको मुद्दामा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले केसीले बयानका क्रममा ‘अदालत र न्यायाधीशप्रति सम्मान रहेको’ भनाइ राखेको भन्दै तत्कालका लागि साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
रिहाईपछि डा.केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजिनामाको मागसहित पुनः त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।